अमेरिका र उत्तर कोरिया बीच गोप्य बैठक, के भयाे बैठकमा कुराकानी? – Malika News
अमेरिका र उत्तर कोरिया बीच गोप्य बैठक, के भयाे बैठकमा कुराकानी?
काठमाडाैं । उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच तनाव कायम छ । दुवै देशबीच आधिकारिक कुराकानी हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि, अमेरिका र उत्तर कोरिया अनौपचारिक कुराकानी भने अझै पनि गरिरहेका छन् । खुला मञ्चहरूमा यी दुवै देश एक–अर्काविरुद्ध अत्यन्त तिखा शब्द प्रयोग गर्छन् । यस्तोमा यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ कि पर्दापछाडिचाहिँ दुवै देशको अनौपचारिक कुराकानी कसरी हुने गर्छ ।
जानकारहरूको भनाइ छ कि पर्दापछाडिबाट गरिएका यी कुराकानी संकट समाप्त गर्नेतर्फको निकै राम्रो प्रयास हुन सक्छ । सबैको ध्यान अघिल्लो चरणको अनौपचारिक कुराकानीमा अडिएको छ । यो बैठक यसै साता मस्कोको एक स्थानमा हुन सक्छ । यस कुराकानीमा उत्तर कोरियाका तर्फबाट वर्तमान अधिकारी र अमेरिकाका तर्फबाट शिक्षाविद् र पूर्वअधिकारीहरू सहभागी हुनेछन् ।
बैठकमा अमेरिकाका तर्फबाट पूर्वसेक्रेटरी अफ स्टेट फर पोलिटिकल अफेयर्स वेंडी सेरमन, परमाणु वैज्ञानिक सिगफ्राइड हेकर र उत्तर अमेरिकी मामिलाका लागि उत्तर कोरियाका डाइरेक्टर जनरल चोई सुन ही सहभागी हुन सक्छन् ।
यस वर्ष उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच यस्ता तीन भेटघाट भइसकेका छन् । पहिलो भेटघाट जनवरीमा त्यतिखेर भएको थियो, जतिखेर भर्खरै ट्रम्प प्रशासन सुरु भएको थियो । कार्नेगी एन्डामेन्ट फर इन्टरनेसनल पिससँग आबद्ध डगलस पाल भन्छन्— मलाई लाग्छ कि उत्तर कोरियाली पक्ष डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति निर्वाचनअघिको प्रचारमा बताइएका कुराकानीबाट चिन्तित थिए ।
जो ट्रम्पले उत्तर कोरियाको आणविक मुद्दालाई सुल्झाउने विषयलाई लिएर बताएका थिए । दोस्रो भेटघाट मे महिनामा भएको थियो । यो बैठक अमेरिका र दक्षिण कोरियाली सैनिकको संयुक्त भेटघाटपछि भएको थियो । प्योङयाङले यस अभ्यासलाई आफ्नो देशमाथिको आक्रमणको तयारी मानेको थियो । अर्को बैठक अगस्ट महिनामा भएको थियो ।
राजपामा सांसदको पद बिक्री, यसरी पैसामा साटीयो टिकट हेर्नुहोस्
अमेरिकाः कर कटौतीसम्बन्धी विधेयक अनुमोदन
ट्रम्पकाे एसिया भ्रमणकाे प्रमुख मुद्धा उत्तर कोरिया
प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएपछि सेना परिचालन